Askar Dowlada Federaalka Looga dilay Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Askar Dowlada Federaalka Looga dilay Gobalka Shabeelada Hoose.
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin weerar qorsheysan ka fuliyeen duleedka degmada Baraawe ee gobalka Shabeelada hoose.
Weerarkan waxey ciidamada Muslimiinta ku qaadeen maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka oo dadka iyo gaadiidka shacabka ku baarta deegaanka Ambareeso ee duleedka degmada Baraawe.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in weerarkaasi qorsheysan lagu dilay labo askari oo ka tirsanaay maleeshiyaatka Murtadiinta ee isbaarada u taalay deegaankaasi.
Warar hoose ayaa sheegaya in labada askari ee lagu dilay duleedka degmada Baraawe sidoo kale laga qaatay labadii qori ee ay wateenâ€™waxeyna sidoo kale wararka la helayo intaasi ku darayaan in tiro askar ah dowlada federaalka looga dhaawacay weerarkaasi.
Habeen hore ayeey aheed markii ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo maleeshiyaatka dowlada Ridada Federaalka iyo kuwa gaalada shisheeyaha ah ay ka sameysteen degmooyinka Lafoole iyo Afgooye ee gobalka Shabeelada hoose.